Daawo Sawirada Oohintii Cristiano Ronaldo Farxad ayaa kadanbeysey | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Oohintii Cristiano Ronaldo Farxad ayaa kadanbeysey
(22-9-2018) Xiddiga kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa, kaddib markii uu soo maray maalmo xanuun badan oo ka dhashay kaadh cas oo loo taagay kulankii Arbacadii ee tartanka Champions League ay Valencia kaga adkaadeen 2-0.
Ronaldo ayaa wakhti hore iska soo xaadiriyey garoonka tababarka Juventus Jimcihii, waxaana uu ciyaartooyada la dhamaystay dhamaan tababarradii kala duwanaa iyo jimicsiyadii.
Ronaldo ayaa ay ka muuqatay dhoola-caddayn iyo farxad iyadoo aanay ka muuqanin murugadii iyo cadhadii kaadhka cas uu ka qaaday.
Juventus ayaa Axadda la ciyaari doonta kooxda yar ee Frosinone C, taas oo Cristiano Ronaldo uu u dagaallami doono inuu ka dhaliyo goolal, isla markaana uu sare usii qaado labadiisii gool ee toddobaadkii hore uu saxeexay.
33 jirkan ayaa Arbacadii kaadhka cas loo taagay markiisii ugu horreysay kulan ka tirsan tartanka Champions League oo uu hore usoo ciyaaray 154 kulan, waxaana uu shaki ku jiraa inuu ciyaari doono kulanka Manchester United ay la yeelan doonaan October 23 oo ay tegi doonaan Old Trafford, hase yeeshee, UEFA ayaa go’aan ka gaadhi doonta in ganaax dheeraad ah la saaro iyo in hal kulan oo kaliya uu maqdaano.